LEGO သည် ၄၀၅၁၆ တွင်ပထမဆုံး LGBTQIA + ကိုစတင်မိတ်ဆက်သည်။ လူတိုင်းသည် Awesome ဖြစ်သည်
20 / 05 / 2021 20 / 05 / 2021 ခရစ် Wharfe 452 Views စာ0မှတ်ချက် 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ, Lego, LGBTQIA +, မဲ Ashton, အဆိုပါ LEGO Group, တွစ်တာ
အဆိုပါ Lego LGBTQIA + အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်၎င်း၏ပရိသတ်များ၏မတူကွဲပြားမှုများအားဂုဏ်ပြုရန်အတွက် Group သည်မိုဘိုင်းအရိုး ၁၁ မျိုးပါ ၀ င်သည့်သက်တန့်ရောင်စုံအစုံလိုက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
LGBTQIA + အသိုင်းအဝိုင်း၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လက်ခံမှုသင်္ကေတအဖြစ်အသုံးပြုသောသက်တံ့အလံမှအချက်များကိုယူပြီး၊ 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ ၎င်း၏ 11 monochrome minifigures ဖြတ်ပြီးအားလုံးပါဝင်မှုကိုထောက်ခံသည့် display model တစ်ခုအတွင်းတည်ဆောက်သည်။
သငျသညျမှန်းဆခဲ့ကြပေမည်သကဲ့သို့, ဒီအတိအကျဒီဇိုင်း၏ဒုတိယဥက္ကMatthew္ဌမMatthewဲအက်တတန်စံပြဖြစ်ပါတယ် မိမိအတွစ်တာအကောင့်မှတဆင့်လှောင်ပြောင် လွန်ခဲ့သောအပတ်ကတစ်ကြိမ်တွင်အုတ်တစ်ခု
မက်သရူးက“ ငါဟာလူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ကိုသင်္ကေတပြုပြီးလူတိုင်းကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ပုံစံကိုဖန်တီးချင်တယ်၊ သူတို့ဘယ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်တယ်၊
“ လူတိုင်းကထူးခြားတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာချစ်ခြင်း၊ လက်ခံခြင်းနှင့်နားလည်မှုအနည်းငယ်ပိုနည်းခြင်းဖြင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မှန်သော၊ ဒီမော်ဒယ်ကငါတို့ဂရုစိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ 'လူတိုင်းကကြောက်စရာကောင်းတယ်' လို့တကယ်ယုံကြည်တယ်!
40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ မMatthewဲ၏အတွေ့အကြုံများအတွက်လည်းအလွန်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်သည် Lego Group သည်နောက်ပိုင်းတွင် LGBTQIA + အသိုင်းအဝိုင်းကိုအမှတ်တံဆိပ်၏ပရိသတ်များသာမက၎င်း၏ ၀ န်ထမ်းများအကြားကျင်းပသည့်ပွဲတစ်ခုအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားသည်။
"ငါသည် ap ဖြစ်ဖို့ကံကောင်းဖြစ်၏art လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာပံ့ပိုးပေးတဲ့အသည်းအသန်အသိုင်းအဝိုင်း "ဟုဒီဇိုင်နာကဆက်ပြောသည်။ “ တီထွင်ဖန်တီးမှုနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ပြမှုကိုချစ်မြတ်နိုးတယ် Lego အုတ်များနှင့်ဤအစုသည်အမြဲတမ်းမျှဝေထားသောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအားလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်၏ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ”
346-piece set ကိုစတင်မှာပါလိမ့်မယ် LEGO.com နှင့် Lego st marking, ဇွန်လ 1 ရက်နေ့တွင်စတိုးဆိုင်များart ကိုယ့်£ 30.99 / $ 34.99 / € 34.99 များအတွက်မာနလ၏။ သင်စောင့်နေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်ဆေးပါ ပုံရိပ်တွေပြခန်း ဘို့ 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ.
← ပဉ္စမ LEGO VIP စုဆောင်းနိုင်သောအကြွေစေ့သည်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းရောင်းထွက်သည်
LEGO ၏ ၀ န်ထမ်းများက Matthew Ashton ကို ၄၀၅၁၆ ဝေမျှရန်လူတိုင်းကိုအားပေးသည် →